Arati Lohorung: आवाज
संसारमा धेरै थरिको आवाजहरु हुन्छ । कुनै आवाज सुन्दा रमाइलो हुन्छ भने कुनै आवाज कानै खाने खाल्को हुन्छ। आवाजको कुरा गर्दा एउटै आवाज सबैलाई मननपर्ने खाल्को पनि हुन्छ अनी कुनै आवाज चाँही सबैलाई मनपर्ने खाल्को हुन्छ ।
मलाई सुकेको पात टेक्दा निक्लिने आवाज ज्यादै मन पर्छ । छरप् छरप् बज्ने आवाज । मलाई पानी बर्सिदा आउने आवाज पनि एकदम मन पर्छ । स्वा गर्ने आवाज अनी पानी पर्दा पातहरु माथि पानी ठोकिदा निक्लिने आवाज पनि औधी मन पर्छ ।
आहा ! प्रकृति कति रमाइलो छ !
Posted by Arati at 3:54 PM
सेतो माकुरा December 25, 2008 at 11:59 PM
टीन को छतमा पानी खङरङ खङरङ बज्यो भने त मलाई निन्द्रा पो लाग्छ । भाले ले बासेपछि उठ्ने काम नगरेको पनि जुगौ भयो गाँठे !
Basanta December 26, 2008 at 8:10 AM
'फिर पत्तोंकी पाजेब बजी---'
मलाई पनि मनपर्छ सुकेका पातहरुमा टेकेर हिँड्दाको आवाज।
फोटो खिच्ने क्रममा